Tag: horonan-tsary instagram | Martech Zone
Tag: horonan-tsary instagram
Alakamisy, Desambra 31, 2020 Alakamisy, Desambra 31, 2020 Douglas Karr
Ireo orinasa, anisan'izany ny ahy, dia mamorona atiny vaovao sy mahatalanjona hatrany ho an'ny tranonkalany - ao anatin'izany ny horonan-tsary, podcast, ary lahatsoratra. Na dia mahatalanjona aza ny famoronana, matetika dia misy làlan-dàlana fohy ho an'io atiny io rehefa mandeha ny fotoana… ka ny fiverenana feno amin'ny fampiasam-bola amin'ny atiny dia tsy tena tanteraka. Iray amin'ireo antony manosika ahy ny mpanjifanay hieritreritra bebe kokoa amin'ny famolavolana tranomboky atiny noho ny famokarana atiny tsy misy farany. misy
Hevitra 8 momba ny varotra ny orinasanao amin'ny Instagram
Asabotsy, Septambra 5, 2015 Sabotsy, Janoary 2, 2021 Douglas Karr
Indraindray aho dia nahita teny nindramina na torohevitra fohy izay tiako zaraina amin'ny fiaraha-monina. Raha tokony handefa bitsika azy fotsiny aho dia manokatra ny rindranasa finday Depositphotos ary mahita sary tsara tarehy. Manangona azy amin'ny alàlan'ny iPhone-ko aho ary avy eo sokafako amin'ny Over App. Ao anatin'ny 10 minitra dia manana sary mahafinaritra aho izay mety hanome aingam-panahy ny sasany amin'ireo tambajotran'orinasa Instagram anay. Ity misy ohatra iray: